Markram uyalivuyela ithuba lokudlala kwezinkundla
Uqhokrayo kwiqela iStandard Bank Proteas uAiden Markram uyalivuyela elithuba lokudlala iimidlalo yakhe yokuqala kwamazwe akwi sub-continent xa bezakudibana ne Sri Lanka kuthotho lwemidlalo emibini yovavanyo eqala eGalle nge12 ka July. Lomfo usaze ngobuso kweliqela kodwa kwi season yakhe yokuqala ubuye namanani acwalileyo edibanisa imitsi engapha kwekhulu nge average ka 55.55 nje kwimidlalo elishumi yovavanyo.
Nangona wayekhona kwiqela iSouth Africa Emerging kwiminyaka emithathu edlulileyo lomfo oneminyaka engamashumi amabini anesithathu uzakudibana okokuqala nenkundla ezijika ibhola kulomgangatho kwaye uthi lithuba eli lokuzibonakaliso ukuba ndinaku ukudlala naphi na.
"Lemidlalo ibalulekile kum kakhulu nekamva lam kweliqela. Ukuvula ngophini ngumsebenzi onzima ngoba iqela endilimeleyo lixhomekeke kuthi thina bantu abavulayo sibabeke kwindawo ebonakalayo. Ndiyayiqonda ukuba kunzima kakhulu xa kusiyiwa ngaphandle kwamanye amazwe kodwa kwelam icala andifuni ukujongwa nje ngomdlali obuya nemitsi xa kudlalwa eSouth Africa qha." intetho ka Markram.
Isininzi kweliqela okosisithile kwingqela yasebusika eMzansi Afrika kodwa abaqeqeshi bakwazile ukubadibanisa ngakumbi aba baqhokrayo zakhona nenkampu ePitoli zokubagcina besemdleni belungiselela olutyelelo.
Sele benentsuku ezintathu kwelilizwe kwaye basebenzise ezintsuku ngokuziqhelanisa nobushushu nokoma kwelilize. Bazakudlala umdlalo wokuzifudumeza ne Sri Lanka XI ngomgqibelo belungiselela umdlalo wokuqala kwiveki ezayo.
"Ngok'qinisekileyo kuzakubanzima. Kunzma naninina xa usiza kulamazwe ngoba imozulu yohlukile kakhulu kweyase khaya ngakumbi ngelixesha enyakeni. Ndizamile ukuphosa amehlo nogxininisa kwibhola ejikayo kwamalungiselelo wam kodwa ke okubalulekileyo kukudlala lento uyaziyo ufunde nemeko yenkundla xa sele ungaphakathi."
Umdlalo wamalungiselelo uqala ngomgqibelo uyokutsho ngecawa eP Sara Oval eColombo. Lomdlalo uqala ngentsimi yeshumi.
Cummins ulifakile uxinzelelo ngosuku lokuqala. Izakuba lidabi kwakhona iNewlands Rabada uyibeke bucala iAustralia Du Plessis ufuna iqela lakhe lizithethelele ngomdlalo wabo Maharaj uzikhelele kumdlalo wakhe wokuqala eKingsmead MORNE MORKEL UZAKUHLALA PHANTSI EMVA KOKHUPISWANO NE AUSTRALIA INDIA ILISONGILE UTYELELO LWABO Du Plessis ulibeke ku Elgar ithemba Cook uxhathisile ngosuku lokuqala Maharaj uzicholele othinti abahlanu Ngu nam-nawe okwangoku.